Bhata batira Chinyorwa hutachiwana ndezvavanoshandisa zvinhu. Nekushandisa kwemota, iyo clutch ndiro ichapfeka zvishoma. Kana iko kupfeka kwasvika kune imwe nhanho, inoda kuchinjwa. Tingaite sei kuziva kuti batira ndiro inofanira kuchinjwa? Zvinoenderana nezvakaitika kare, ini ndinofunga iyo fo ...Verenga zvimwe »
Iyo yekutengesa Flash inowanikwa ikozvino neNo MOQ!
Post nguva: Aug-21-2020
Gore rino rave rakaoma zvakanyanya kwatiri tese nekuda kwecorona virus. Tinovimba tinokwanisa kushanda pamwechete kuti tirarame uye tibudirire. Isu takagadzirira zvakawanda stock muChina neDubai matura ako iwe. Kana iwe uchida kutarisa mutengo wezvimwe zvinhu, inzwa wakasununguka kutibata nesu. Bata: +86 1887580 ...Verenga zvimwe »
Imwe-yekumira sevhisi yekutakura pamwe
Post nguva: Jun-30-2020
1. 1 chidimbu MOQ, 24 maawa Dhirivhari. 2. Zvitoro zvekutengesa zvakanangana muDubai uye Guangzhou 3. Kuwanda kwemasheya 4. Kupedzisa chigadzirwa chakakomba ane anopfuura mazana manomwe ezviuru + makodhi akasiyana 5. Kubatanidzwa kwevagadziri vasere vane makore anopfuura gumi mukugadzira.Verenga zvimwe »